Azịza ya bụ Brunello: Mkpụrụ vaịn ahụ Bụ?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Azịza ya bụ Brunello: Mkpụrụ vaịn ahụ Bụ?
Na-agbasa News Travel • culinary • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Sangiovese na Ubi Vine ahụ? Brunello (aja aja) na iko
A na-ewere Sangiovese dị ka otu n'ime ụdị mkpụrụ vaịn a kụrụ n'ọtụtụ Italy (otu n'ime osisi vine 10 ọ bụla). Ga-ahụ mkpụrụ vaịn ndị a na pasent 67 nke Tuscan, Ubi vaịn Italy ọ bụkwa mkpụrụ vaịn kachasị na 25 DOC (G) s. Mkpokọta mmepụta Brunello nke Brunello? Okwu 750,000 (pasent 65 na-arụ ọrụ na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ma ọ bụ naanị site na ụlọ ndị a na-a wineụ mmanya na nzuzo). United States bụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ngwa na Brunello, na-eri pasent 25 nke mmepụta.
A Mụọ Mkpụrụ vaịn Ọhụrụ
Ubochi omumu mkpụrụ vaịn Sangiovese na-enyo enyo. Researchfọdụ nnyocha e mere na-egosi na ndị Rom na-eji mkpụrụ vaịn a eme mmanya ha. E kwuru ya na narị afọ nke 16 site n'aka ọkà mmụta banyere ihe banyere ala, Gian Vittorio Soderini nke kwuru banyere mkpụrụ vaịn Sanghiogeto dị mma maka ịme mmanya. Na narị afọ nke 18 Sangiovese ghọrọ onye a ma ama ma kụọ ya na mpaghara ahụ dum. Na 1773, Cosimo Villa Franchi dere banyere mkpụrụ vaịn na "L'Oenoligia Toscana" (mkparịta ụka ya banyere Chianti). Na narị afọ nke 19, na Baron Bettino Ricasoli, onye nwe Castello di Broilio na onye ọhụụ nke Chianti, nyere usoro nhazi maka ịme mmanya site na iji mkpụrụ vaịn Sangiovese.
Ekwenyere na mkpụrụ vaịn ahụ sitere na ngafe na-enweghị atụ n'oge oge Etruscan nke akụkọ ntolite na DNA kpebisiri ike na ịgafe dị n'etiti mkpụrụ vaịn Ciliegiolo na Calabrese di Montenuovo. A na-eji Sangiovese Grosso mee ihe na Brunello di Montalcino na Vino Nobile di Montepulciano mmanya.
Ọ Bụchaghị Zuru Okè
Mkpụrụ vaịn ahụ ezughị oke ka ọ na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe, na -emepụta clones. Banfi Vineyards edere ihe karịrị nsụgharị 600 nke Sangiovese na ala ha. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-eji àgwà a eme ihe maka uru nke winery na ala na-eji ọtụtụ clones iji melite nguzozi na mgbagwoju anya maka mmanya ha. Ọnọdụ ihu igwe dị na Mediterenian dị mma maka Sangiovese n'ihi na ọ na-enwe oge ọkọchị na-ekpo ọkụ na ihu igwe akọrọ na-eduga na ntozu oke beri, ebe esemokwu ehihie na abalị na-ewepụta aromas siri ike.
Okpukpe ahụ, Brunello di Montalcino na Rosso di Montalcino (nke a ga-enwe obi ụtọ na-eto eto) chọrọ ka iwu mee ya na Sangiovese. Na mgbakwunye, iwu DOCG chọrọ ka ubi ubi ubi Brunello kụrụ n'ugwu nwere ezigbo anwụ, na elu adịghị elu 600 mita ma ọ bụ ihe dịka 2000 ft. (N'ọnọdụ ụfọdụ anaghị achịkwa iwu a n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ). A na-ezube ịdị elu iji hụ na mkpụrụ vaịn na-erute ezigbo uto na ekpomeekpo tupu owuwe ihe ubi. Ihe ọ bụla dị elu karịa mita 600 na mesoclimate na-ajụ oyi ruo n’ókè nke ịbụ onye a na-apụghị ịtụkwasị obi. Gụ akụkọ zuru ezu na WINES.TRAVEL.